हेटौँडामा चार जनामा ‘आरडिटी पोजेटिभ’ – Online Nepal
हेटौँडामा चार जनामा ‘आरडिटी पोजेटिभ’
April 17, 2020 337
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पत्ता लगाउन गरिएको द्रुत परीक्षण विधि ¥यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) परीक्षणमा हेटौँडामा चार जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं ४ मा ४० जनामा गरिएको परीक्षणमा चार जनामा पोजेटिभ देखिएको हो ।
हेटौँडामा शुरु भएको यो विधिको परीक्षणका क्रममा उपमहानगरपालिकाका दुई वडामा ४९ जनाको रगतको नमूना परीक्षण गरिएको थियो । वडा नं ४ मा भने चार जनामा पोजेटिभ देखिएको परीक्षणमा संलग्न मेलानका केन्द्रीय सदस्य उत्सव चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो ।
परीक्षणका क्रममा ५० वर्षीया एक भारतीय महिलासहित २४, ३२ र ६७ वर्षका तीन जना पुरुष छन् । पोजेटिभ पाइएका पुरुषमध्ये २४ वर्षीय युवा साउदी अरेबियाबाट आएका थिए भने अरु भारतबाट आएका थिए । रक्त नमूनाको परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि उनीहरुको स्वाब सङ्कलन गरी प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित प्रयोगशालामा पठाइएको जनाइएको छ ।
कोरोना पोजेटिभ भेटिएका चारै जनालाई हेटौँडा अस्पतालले सञ्चालन गरेको आइसोलेसन कक्षमा राखिएको उपमहानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारको सहयोगमा उपमहानगरपालिकाले विदेशबाट फर्किएकाको कोरोना परीक्षण शुरु गरेको हो ।
Prevलण्डनमा थप एक भूपू सैनिकको नि*धन
Nextनेपालमा को*रोनाले महामारीको रुप नलिने, १६ जना संक्रमितमा देखियो यस्तो स्पष्ट संकेत
सुस्मिताको ४५ औ तिथिमा समाहल्न गार्‍हो भयो सुस्मिताकी आमालाई । रुदै माफि मागिन सुस्मिताकी आमाले । (हेर्नुहोस भिडियो)
श्रीमती ७ प्रकारका हुन्छन्, तपाई कस्ती ? या तपाईकी श्रीमती कुन वर्गकी ?
यसकारण कोरोना भाइरसबाट काठमाडौँका उपत्यका सुरक्षित !
कोरोना भगाउने स्यानिटाइजर पिउँदा ३ जनाको मृ*त्यु, ४ जनाले गुमाए दृष्टि
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (61911)
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (50979)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (45317)
काठमाडौंमा डेरा गरेर बस्नेहरुको लागी आयो यस्तो खबर ! (44767)
जेठ ३ गते शनिबारदेखि यस्ता कडा नियमहरु लागु हुने, लकडाउनमा यस्तो कसैले नसोचेको नियम आयो हेर्नुहोस (43320)
वैशाख ३ गतेपछि यस्तो छ आवतजावतको तयारी , ३ गते सम्म धैर्य गरौ (41266)
तल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेकाको जाँच गर्दा डाक्टर नै च*कित हुने देखियो विश्वकै दुर्लभ घ*टना (37961)
नवराज-शुष्मा प्रकरण : नवराजकी प्रेमीका शुष्माले पहिलोपटक मुख खोलीन् (36192)
लकडाउनकै बीच भर्खरै यस्तो घोषणा, जनताको जीवनका लागि यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई (भिडियो सहित्) (29161)
यसरी बस्यो १६ बर्षे बालिकाको पेटमा बच्चा , अन्तत: आफैले भनिन् कस्ले गर्यो यस्तो (भिडियो सहित) (27818)
ट्रायलमा ६० नम्बर आए लाइसेन्स नत्र यस्तो ?
अनिषाले माया लुकाउन सकिनन्, आँखाभरी आँशु पारेर भगवानसंग गरिन् पुकार ‘कञ्चनलाई चाँडै निको होस्’ (भिडियो हेर्नुस्)
साङ्लोले दुख दिएर हैरान हुनुहुन्छ ? घरेलु उपायले सजिलै भगाउनुस्
आफ्नो इच्छा अनुसार छोरावाछोरी जन्माउने ६ सुत्र के भन्छ अध्ययन
निधारको रेखामा लुकेको हुन्छ यस्तो रहस्य, यसरी थाहा पाउनुहोस् भविष्यफल
© Copyright 2016–2021 Online Nepal. All rights reserved.